တရုတ်နိုင်ငံက “ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး” ခွဲထွက်ရေးအင်အားစုများကို ထောက်ခံမှုရပ်တံ့ရန် အမေရိကန်အား တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွန်းရင်အား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု၌ တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် “ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး” ခွဲထွက်ရေးအင်အားစုများကို ထောက်ခံနေခြင်းအား ရပ်တံ့သင့်ကြောင်း နှင့် ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ခိုင်မာသော ဆောင်ရွက်မှုများလုပ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ned Price ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းမှုအပေါ် တုန့်ပြန်ပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွန်းရင်က အထက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟွာက ထိုင်ဝမ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိုင်ဝမ်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်မှ ဟိုဟိုဒီဒီပြောပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း ၊ အမေရိကန်၏ သက်ဆိုင်ရာ ပြောဆိုမှုများသည် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒနှင့် တရုတ်-အမေရိကန် ပူးတွဲကြေညာချက် ၃ ခု၏ သတ်မှတ်ချက်များကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ရာ ပြင်ပသို့ အလွန်တရာ မှားယွင်းသော တာဝန်မဲ့သော အချက်ပြမှု တစ်ခုဖြစ်စေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင်ဟွာချွန်းရင်က မကြာခဏဆိုသလိုပင် အမေရိကန်သည် ထိုင်ဝမ်အား စစ်လက်နက်များရောင်းချခြင်း ဖြင့် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် အရွေ့များကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း နှင့် ထိုင်ဝမ်သို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၅၀ တန်ဖိုးရှိ စစ်လက်နက်များ ရောင်းချခြင်းအစီအစဉ် ၊ ထိုင်ဝမ်တွင် အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်များ ဆင်းသက်ခြင်း နှင့် ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားဖြတ်၍ အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောများ မကြာခဏဝင်ထွက်သွားလာခြင်း အပါအဝင် အမေရိကန်သည် ထိုင်ဝမ်နှင့်အတူ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်း ရန်စသော လုပ်ရပ်များသည် တရုတ်-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး နှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်ရေး ကို အားယုတ်ပျက်ပြားစေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံက ၎င်းတို့ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ကန့်ကွက်ပြီး လိုအပ်သောတန်ပြန် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအား လုပ်ဆောင်ထားပြီဖြစ်သည်။
“တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒ”သည် တရုတ်-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး၏ နိုင်ငံရေးအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်းကို ဟွာက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး ထိုင်ဝမ်မေးခွန်းအပေါ် ဖြေကြားရာတွင် အမေရိကန်အနေဖြင့် ၎င်းပါသာ တစ်ဖက်သတ်ဖော်ဆောင်ထားသော အချက်အလက်အစား တရုတ်-အမေရိကန် ပူးတွဲကြေညာချက် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို လိုက်နာကျင့်သုံးသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး” သည် အောင်မြင်မှုရလဒ်မရှိကြောင်း ဟွာကပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် “ ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေး” ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးကို ခိုင်ခိုင်မာမာ နင်းခြေပစ်ရန် လိုအပ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ပိုင်နက်နယ်မြေ နှင့် နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ခိုင်မာစွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ အမေရိကန်ဟာ သူ့အမှားကို သူသိသင့်ပါတယ်၊ တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒနဲ့ တရုတ်-အမေရိကန် ပူးတွဲကြေညာချက် ၃ ခုရဲ့ သတ်မှတ်ချက်များကို တိတိကျကျ လိုက်နာရပါမယ် ၊ ထိုင်ဝမ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ဂရုတစိုက် နဲ့ မှန်ကန်သင့်လျော်စွာကိုင်တွယ်ရပါမယ် ၊ ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးရဲ့ ခွဲထွက်ရေးအင်အားစုတွေကို ထောက်ခံတာနဲ့ မြှောက်ပေးတာတွေ ရပ်တံ့ရပါမယ် ၊ ပြီးတော့ ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတစ်လျှောက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကို အားယုတ်စေမယ့်အစား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ အတွက် ခိုင်မာတဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကို လုပ်သွားရမှာပါ ” ဟု ဟွာက ဆိုသည်။(Xinhua)
China urges U.S. to stop supporting “Taiwan independence” separatist forces
BEIJING, Oct.4(Xinhua) — The United States should stop supporting “Taiwan independence” separatist forces and take concrete actions to maintain peace and stability across the Taiwan Strait,aForeign Ministry spokesperson said Monday.
“The United States should correct its mistakes, earnestly abide by the one-China principle and the stipulations of the three China-U.S. joint communiques, prudently and properly handle Taiwan-related issues, stop supporting and emboldening separatist forces of ‘Taiwan independence’, and take concrete actions to safeguard rather than undermine peace and stability across the Taiwan Strait,” Hua said. Enditem